UADAM PEATY UJOYINE NGOKUNGQONGQO YIZA UKUDANISA UMGCA WE-2021 - UKUZONWABISA
Intshatsheli yeOlimpiki uAdam Peaty uqinisekisile ngokungqongqo ukuza kuDanisa ngo-2021
Olimpiki UAdam Peaty uye waba ngusaziwayo wamva nje wokujoyina umgca weStrictly Come Dancing 's uthotho oluzayo.
Le mbaleki yenza imbali kwii-Olimpiki zaseTokyo zalo nyaka, yaba yindadi yokuqala yaseBritane ekhusela itayitile ye-Olimpiki emva kokuphumelela igolide kwi-Men's 100m Breaststroke eRio 2016 nakweyona midlalo mvanje.
Ndicinga ukuba oku kuyothusa abantu abaninzi, kodwa ndichulumancile ekugqibeleni ukuba ndibelane ngeendaba zokuba ndiza kujoyina ngokungqongqo kulo nyaka, utshilo kwingxelo. Ndijonge phambili ekwenzeni into eyahlukileyo ngokupheleleyo kwaye ndizicelomngeni kude nedama. Ndiyathemba ukuba indalo yam yokhuphiswano iza kuzihlawulela izakhono zam zokudanisa!
I-BBC yeRadio 1 yaqhekeza iindaba, kunye neNewsbeat uSteve Holden encokola neOlimpiki, oza kuthi atshintshe ichibi lomgangatho wokudanisa kamva ehlotyeni.
Abadlali abathathu bokugqibela abazokujoyina ngokusesikweni ukungqinelana okuza ngokungqongqo kuyabhengezwa namhlanje, kunye nabafazi abaKhululekileyo betyhila umntu okhuphisanayo neshumi elinesine kunye neLateish Show ebhengeza usaziwayo wokugqibela.
Ukufumana iindaba zamva nje kunye neengcebiso zeengcali zokufumana ezona zinto zintle kulo nyaka, jonga kwi-Black Friday 2021 kwaye NgoMvulo ngoMvulo 2021 Izikhokelo.
Izolo ndibone inkwenkwezi ye-EastEnders UNina Wadia Bhengeza ukuba uzakuthatha inxaxheba kuthotho lwalo nyaka kuLorraine, kunye nenkwenkwezi yesepha exelela uChristine Lampard: Ndiyathanda ukudanisa ngokungathi akukho mntu ubukeleyo. Ke kufuneka nje ukuba sivale amehlo kubagwebi kwaye ndiza kuphumelela!
Kwangoko evekini, intombi kaGordon Ramsay UTilly Ramsay uxelele uEamonn wasekuseni noRuth ukuba uzokunikela ngezihlangu zakhe zokudanisa, ajoyine ukuthanda kukaMcFly UTom Fletcher , umhlekisi URobert Webb , Izipho zeTV UAJ Odudu , Umncedisi wesidlo sakusasa we-BBC UDan Walker kunye nomdlali weqonga UGreg Wise kumgca.
NgoLwesithathu, i-BBC iqinisekisile ukuba ngumdanisi oqeqeshiweyo UNadiya Bychkova wayevavanyile ukuba une-coronavirus , Oko kuthetha ukuba amalungu athile eqela labadlali kunye nabasebenzi kuya kufuneka bahlukane kangangeentsuku ezili-10-nangona kunjalo, umsasazi wathi uthotho aluzukulibaziseka.
Ngqongqo Yiza ukudanisa i-2021 izokwazisa kamva ehlotyeni kwi-BBC One. Ukuba ujonge okungakumbi ukubukela, jonga isikhokelo sethu seTV. Ndwendwela indawo yethu yoLonwabo kuzo zonke iindaba zamva nje kunye nezaziso ezingqongqo.
Iitoni zeWeng-Chiang ★★★★★
Iphi i-Polar Express kumabonwakude kule Krisimesi? Ujonga njani kwaye usasaze kwi-Intanethi
U-Emily eParis soundtrack: Zonke iingoma eziboniswe kuthotho lweNetflix lukaLily Collins
umdlalo wetrone uthotho olutsha
Isicakakazi sentsomi yexesha 3 uk umhla
Inkqubo yetape yesondo kwisitishi 4
I-logo enkulu ye-british ibhaka
idlala njani ibhola namhlanje
Burnley v west ham umjelo ophilayo